ओल्बाको अंग्रेजी फरर, हनुमानलाई बास्ना हरर – बाह्रथरी कुरा
ओल्बाको अंग्रेजी फरर, हनुमानलाई बास्ना हरर
April 8, 2018 By Boston बाह्र सत्ताईस कुरा, राजनिती
फोटो साभार: नेसनल हेराल्ड
कहिलेकाहीं १२ थरी हरायो भन्ने गुनासो सुन्न पाइन्छ। तर १२ थरी हराएको हुँदैन। त्यो समुद्रको बालुवामा मुन्टो गाडेर बस्ने लामालामा खुट्टा भएको चरो हुन्छ नि, हो त्यस्तै हो १२ थरी। मरेजस्तो लाग्ला तर जिवितै। हामीले पहिल्यै भनेका छौं, १२ थरी व्यवसायिक रुपमा अघि बढ्न खोजेको ब्लग साइट हैन, न त यो क्लिक बटुलेर विज्ञापन खोज्ने समाचार साइट नै हो। यसमा लेख्नेहरु व्यवसायिक लेखक पनि हैनौं र पत्रकार पनि हैनौं। हामी कहिलेकाहीं महिनौंसम्म समाचार नहेरी, देश, समाजलाई बाल दिएर आफ्नै काममा व्यस्त भइरहेका हुन्छौं। त्यस्तोबेला हामीलाई १२ थरी ब्लग पनि छ है हाम्रो याद समेत हुँदैन। अहिले पनि यस्तै भएको हो। लामो समय हामीबाट कुनै सामाग्री नआएकोमा क्षमा माग्दा पनि हुने हो तर हामी क्षमा माग्दैनौं। किनकी हामी ठूला मान्छे हौं, हामी कसैलाई गन्दैनौं, मान्दैनौं। हामी हुट्टिट्याऊँ हौं, हामीले सगर थामेका छौं। अरु सबै ऐेरे गैरे नत्थु खैरे हुन्। यति भनिसकेपछि पनि यहाँभन्दा अगाडि बढेर पढ्नु भयो भने लप यु डियर !
कसैलाई भन्नै पर्दैन, प्रधानमन्त्री भएको महिना दिन बित्दा वा नबित्दै हैदरावाद हाउसमा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन जाने परम्परालाई कायम राख्दै हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नुभएको छ। यसपाली भारत भ्रमणमा के होला? कसो होला? ओलीज्यूले के के बोल्नुहोला? नाकाबन्दीको बारे केही भन्नुहोला कि नहोला? नोटबन्दीको बारे कुरा होलान् कि नहोलान्? भन्ने यावत चर्चा हुँदै गर्दा बजरङ्गबलीको एउटा समुह चाहिँ ओलीज्यूले बोल्नुभएको अंग्रेजीमा यति मक्ख परे कि अरु सबै मुद्दा गौण बने। ओल्बाको अंग्रेजी र हनुमानज्यूहरुको जयजयकारमा १२ थरीले आफ्ना केही शब्द खर्च गरेर तपाइँहरुको समय बर्बाद पारेकोमा पनि क्षमायाचना चाहिँ गरिन्नँ। बालै हो।
सबैभन्दा पहिला हामी नेपालीहरुको अंग्रेजी मोहबारे चर्चा गरौं। आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कूलमा हालेको २/४ महिनापछि बाबुआमाको फूर्ति हेर्नलायकको हुन्छ। आफ्ना बच्चाले फरर अंग्रेजी राइम् सुनाउँदा छरछिमेक, ईष्टमित्र, जोरीपारीका अघि फुल्ने नाकको गणना नै हुन्न। यस्तो समाजमा बसेका हामी, प्रधानमन्त्रीज्यूले अंग्रेजीमा बोल्दा त अोहोहो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा नि खतरनाक अंग्रेजीमा बोल्नुभयो ओली कमरेड भनेर हनुमानजीहरुको उत्सव छ। अंग्रेजी बोल्दिएपछि एजेण्डा सेजेण्डा बाल हो। अरे यार, संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा कमरेड ओलीले बोल्नुभएको अंग्रेजी सुन्नुस् न हो। के बोल्नुभयो, के के मुद्दा उठे भनेर नि सोध्ने? अंग्रेजीमा धाँसु भाषण हानिसक्नुभयो, कुबुद्धिबहादुरहरु एजेण्डामा अड्केका छन्।
ओल्बाको अंग्रेजी यति धाँसु भएछ कि केही ठूला सम्पादक (सम्पादक त सबै ठूलै हुन् तैपनि एकदोटा टिभीका पनि सम्पादक भएर अनलाइनतिर बरालिएका सम्पादकको कुरा गरेको यहाँ चाहिँ) ले त सामाजिक सन्जाल ट्विटरमा ट्विट नै गर्नुभयो- १० कक्षा नि नपढेका प्रम ओलीज्यूले अंग्रेजीमा धाँसु भाषण ठोकिबक्स्यो, पढेका विद्वान महाशयहरु के हेर्दै’ भन्ने लाइनबाट। अरु पुच्छरमा आगो बालेर दौडेका हनुमानहरुका त के कुरा। अंग्रेजी बोल्दैमा विद्वान हुने भए ठमेलतिरका सड्कमा खैरेहरुसँग फरर अंग्रेजी बोल्दै टेन रुपिज् प्लिज् भन्नेहरु सबैभन्दा ठूला विद्वान मानिने थिए होलान् नि।
ओल्बाले भारत भ्रमणमा के के गर्नुभयो भनेर त समाचारहरु पढिहाल्नुभयो होला। अब सगरमाथाबाट सिधै समुद्रसम्म पनीजहाजमा सरर यात्रा गर्न पाइने भइसक्यो। यो पानीजहाज पनि ओल्बाको धाँसु अंग्रेजी जस्तै धाँसु पानीजहाज हुन्छ। साथमा आउनेछ रक्सौलबाट सिधै काठमाडौंसम्म रेल।
उसै त हनुमान, त्यसमाथि रामजीको पिएचडी
फोटो साभार: नेपाल माउन्टेन न्युज
प्रमज्यूको भ्रमणले हनुमानहरुलाई अर्को एउटा पनि भजनको गेडो थपिदियो। (गीतमा गेडा हुन्छ भन्छन् नि, त्यही गीतको गेडालाई यहाँ भजनको गेडा भनिएको हो)। प्रम ओलीज्यूले भारत भ्रमणको बेला भारतको जीबी पन्त कृषि विश्वविद्यालयबाट मानार्थ पिएचडी पाउनुभयो। यसलाई हनुमानहरुले त ठूलो उपलब्धि माने नै। उनीहरुको तर्क छ, ओल्बालाई १० पास नगरेका भन्नेहरुको मुखमा अब बुजो लाग्यो, किनकी वहाँ त अब पिएचडी डाक्टर हो। तपाइँलाई हाँसो नलाग्ला तर जब पढेर पिएचडी पाएका डा. बाबुराम भट्टराईले जब ‘पिएचडी क्लबमा ओलीज्यूलाई स्वागतत छ’ भनेर ट्विट गरे तर यो टिप्पणिकार हाँसेर बेहोसै भयो। २ दिनपछि होस खुलेर यो लेख लेखिएको हो।
यसको अर्को रमाइलो पक्ष पनि छ। ओल्बाले मानार्थ पाएको पिएचडीको बारे वाह वाह गर्नेहरुमा ती पनि थिए जो ‘राष्ट्रकवि’ माधवप्रसाद घिमिरेलाई नेपाली सेनाले मानार्थ रथीको सम्मान दिँदा कट्टु खोलेर घिमिरेको सत्तोसराप गरिरहेका थिए। प्रम ओलीज्यूले योभन्दा पहिला पनि पिएचडीको सम्मान पाउनुभएको थियो क्यारे। तर यसपाली भारत भ्रमणमा पाएको हुनाले यसको विशेष महत्व रहेको छ।
यसअघि भारतले नाकाबन्दी गर्दाताका तत्कालिन प्रमका रुपमा ओलीज्युले राखेको अडानका लागि सबै नेपालीले ओल्बाको प्रशंसा गरेका थिए। त्यसको ब्याज चुनावमा एमालेले पाइसक्यो। चुनाव त जितिहालियो। राष्ट्रवाद त्यसै बलियो भइगयो। उबेला रातारात चीनतिरबाट रेल लिन दौडिनुभएका ओल्बाले भारत भ्रमणबाट फर्केर त्रिभुवन विमानस्थलमै खोक्दिनुभयो- हामी भारतलाई चिढ्याउन चाहदैनौं। हनुमानज्यूहरुको तर्क छ- ‘राष्ट्रवाद भनेको भारतको विरोध हैन।’ सही हो, हनुमानज्यूहरु, चुनावअघि राष्ट्रवाद भनेको भारतको विरोध हो, सत्ता प्राप्तिपछि राष्ट्रवाद भनेको भारतको विरोध हैन।
पुनश्च: यति लेखिसकेपछि यो टिप्पणिकार कालो कांग्रेस भयो। कांग्रेस सत्ताबाहिर बस्नुपर्दाको रोदन हो यो लेख।
भारत भ्रमण, राजनीति, रेल
म *जी मर्द
पढाइ लेखाइ के काम, हलो जोत्यो खायो माम् !